လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်- ယူ. ဆုံးဖြတ်ချက်-Making အပေါ်လိင်စိတ်နိုးထမှု၏သက်ရောက်မှု (2016)
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2016 Jan;45(1):33-42. doi: 10.1007/s10508-015-0589-y.
Skakoon-Sparling S က1,2, Cramer KM3, Shuper PA ဆိုပြီး4,5.
လိင်စိတ်နိုးထပိုလုံခြုံ-လိင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ impact နိုငျသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတွက်အရေးပါသော Contextual အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများအကြားလိင်စိတ်နိုးထများ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု ၁ (N = ၁၄၄) သည်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်ပတ် ၀ န်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ကြားနေဗီဒီယိုကလစ်များနှင့်လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွသောလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏ဆိုးကျိုးများကိုအကဲဖြတ်ရန်ယူဆချက်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထ၏အဆင့်မြင့်သတင်းပေးပို့သူကိုယောက်ျားမိန်းမတို့လည်းအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (အသစ်တစ်ခုကိုလိင်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူဥပမာအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သာ. ကြီးမြတ်ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြ။
စမ်းသပ်မှု ၂ (N = ၁၂၂) သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏ယေဘုယျစွန့်စားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်မှု ၁ နှင့်ကွန်ပျူတာဘလက်ဂျပ်ကဒ်ဂိမ်း၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းများကဲ့သို့ဗီဒီယိုကလစ်များနှင့်အတူတကွလေ့လာခဲ့သည်။။ သင်တန်းသားများကိုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးအခြေအနေများအတွင်းအန္တရာယ်များကစားသို့မဟုတ်လုံခြုံကစားဖြစ်စေအောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ တွင်စမ်းသပ်မှု2အတွက် creased လိင်စိတ်နိုးထ Impulse နှင့် Blackjack ဂိမ်းအတွက်အန္တရာယ်များပြဇာတ်စေရန်ကြီးမြတ်သောလိုလိုလားလားနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အားကောင်းတဲ့လိင် visceral တွေကိုရှိပါတယ်ဘယ်မှာအခြေအနေများအတွက်ခိုင်မာတဲ့လိင်စိတ်နိုးထကြုံနေရနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့အောက်ပိုင်းပြုခဲ့ရှိစေခြင်းငှါနဲ့ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ထိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းအနေနဲ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါသင့်လျော် prophylactic ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအသုံးဖို့ပျက်ကွက်အထောက်အကူပြုပေမည်။
KEYWORDS: စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ; ဘေးကင်း-လိင်အပြုအမူ; လိင်စိတ်နိုးထ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီးရည်ရွယ်ချက်
Doi: 10.1007 / s10508-015-0589-y က